सबै कुरा तपाईलाई एस्ट्रोलाबको बारेमा जान्नु आवश्यक छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन इतिहासभरि धेरै सिक्न, अवलोकन र अनुसन्धान वृद्धि गर्न र अन्तमा कुनै विषयमा ज्ञान सुधार गर्नको लागि विकसित गरिएको छ। पुरानो समयलाई फर्केर हेर्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि पहिले जस्तो उपकरण बनाउनको लागि त्यति सुविधा थिएन, त्यसैले यो सिर्जना गर्न यो उनीहरूको लागि पर्याप्त कुरा हो। आकाश र यसको अवलोकनका लागि नक्षत्र, ती उपकरणहरूको लागि खोजीमा मद्दत गर्न आविष्कार गर्नुपर्‍यो। यसका लागि astrolabe.
यस लेखमा हामी वर्णन गर्न जाँदैछ कि एस्ट्रोलाब के हो, यो कसरी प्रयोग हुन्छ र के प्रकारहरू छन्।
1 एस्ट्रोलाब के हो?
3 एस्ट्रोलाबका प्रकारहरू
3.1 प्लानिस्फेरिक एस्ट्रोलाब
3.2 विश्वव्यापी एस्ट्रोलाब
3.3 नाविक एस्ट्रोलाब
एस्ट्रोलाब के हो?
पहिले र अहिलेको प्रविधि के हो भनेर कल्पना गर्न हामीले भर्खरै सोच्नु पर्दछ कि हजारौं र हजारौं मानिस बाँचिरहेका थिए जब एस्ट्रोलाब आविष्कार गरिएको थियो तर तिनीहरूलाई यसको अस्तित्वको बारे पनि थाहा थिएन। यो किनभने मिडिया पहिले आजको जस्तो विकसित थिएन।
एस्ट्रोलाब आकाशमा नक्षत्रहरूको खोजी बढाउन स्टार खोजकर्ता हो। सभ्यताहरूको साथसाथै, नक्षत्र र उनीहरूको अर्थको बारेमा ज्ञानमा अधिक चासो थियो।
क्लासिक एस्ट्रोलाबहरू ब्रास र तिनीहरू व्यास मा १ 15 देखि २० सेमी मात्र थिए। जहाँ सम्मिलित धेरै प्रकारका एस्ट्रोलेब थिए, केहि ठूला र केहि सानो, ती सबैले समान विशेषताहरू बनाए।
एस्ट्रोलाबको बडीमा एउटा मेटर छ जुन केन्द्रमा प्वालहरू भएको डिस्क हो। औंठीलाई धन्यवाद तपाई अक्षांशको डिग्री देख्न सक्नुहुन्छ। मध्य भागमा हामीसँग ईर्ड्रम छ, सर्कलमा कोरिएको जुन उचाई दर्शाउँछ। तिनीहरूसँग नेटवर्क पनि छ, जुन एक काटिएको डिस्क हो जुन यसको मुनिको ईडर्डम अवलोकन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सुझावहरूमा तपाइँ प्रतिनिधित्व ताराहरूको संख्या देख्न सक्नुहुन्छ। माकुरोको माथि हामी अनुक्रमणिका छ जुन तारालाई हामीले हेरिरहेका छौं। एलिडेड हेर्न को लागी हेर्न सकिन्छ कि स्टार कति टाढा रहेको छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि यसको अपरेसन वास्तवमै जटिल भएको छ। केवल यसलाई ह्यान्डल गर्न, सयौं पृष्ठहरूको म्यानुअलहरू आवश्यक पर्दछ। लक्ष्य मात्र छ तारा हाजिर गर्नुहोस् र यसको स्थिति थाहा पाउनुहोस्। यसले नाविकहरू भएको समय र अक्षांशमा जानकारी प्राप्त गर्न नेभिगेसन उपकरणको रूपमा पनि काम गरेको छ।
एस्ट्रोलाबले सेलेस्टियल गोलाकार क्षेत्रको प्रक्षेपण भएर काम गर्दछ जुन स्नातक परिधि हो। यसको एउटा सुई छ जुन क्रसहेयर वरिपरि घुम्छ जहाँ तपाईं प्रश्नमा तारा ठीक गर्नुहुन्छ। एस्ट्रोलाबको उद्देश्य कोणको उचाइ मापन गर्न सक्षम हुनु हो जुन तारा क्षितिजमा वस्तुहरूको माथि छ। सामान्यतया यो उपकरण प्रयोग गर्नका लागि हामी स्ट्र स्ट्रमा स्ट्रोकको माध्यमबाट फोकस गर्छौं र अर्को व्यक्ति त्यो हो जसले स्नातक भएको मापनमा स्ट्रिंग नम्बर पढ्छ। यसको मतलब यो हो कि एकल व्यक्तिले यस प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्न सक्दैन, किनकि जब हामी टाउकोले चिन्ह हेरेर हटाउँदछौं, हामी त्यो तर्फ सर्नेछौं जहाँ तारा देख्छौं।
अर्को समारोह यो उपकरण अक्षांश मापन गर्न छ। यो गर्नका लागि हामीले आकाशका तारा मध्ये एक र यसको गिरावट चिन्नु पर्छ। हामी केही गिरावटहरू मार्फत यो गिरावट प्राप्त गर्दछौं। हामीलाई कम्पास र एस्ट्रोलाब चाहिन्छ। अक्षांश मापन गर्न हामी गणितीय सूत्र प्रयोग गर्छौं यदि हामी उत्तरी गोलार्ध वा दक्षिणी गोलार्धमा छौं भने फरक हुन्छ। यदि हामी उत्तरी गोलार्धमा छौं भने हामीले केवल तारा र गिरावटको औसत उचाई थप्नुपर्नेछ र हामी 90 ० डिग्री घटाउनेछौं। यदि हामी दक्षिणी गोलार्धमा छौं भने, हामी केवल ताराको औसत उचाइ र केही खण्ड नगरी यसको गिरावट थप्नेछौं।
हामीले अगाडि उल्लेख गरिसक्यौं, यी उपकरणहरू विभिन्न प्रकारका सिर्जना गरिएका थिए यसलाई कसले प्रयोग गर्थे त्यसमा निर्भर थियो। तिनीहरू पनि परिमार्जित थिए तिनीहरू प्रत्येक क्षणको परिस्थितिमा अनुकूलन। उसको खोजीलाई निरन्तर अनुमति दिइयो नयाँ तरिकाहरू र सामग्रीहरू अवलोकन सुधार गर्न बाहिर आए र, बारीमा, अन्य उपकरणहरू पहिले विकसित गरिएको भन्दा बढि विकसित भएको छ।
हामी विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं कसरी एस्ट्रोलाब का मुख्य प्रकारहरू एक जस्तै छन् र कसरी तिनीहरू फरक छन्। यीसँग विभिन्न प्रकारका निर्माण र सामग्रीहरू थिए। यद्यपि तपाईले देख्नुहुनेछ कि ती सबैको आज हामी प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजीमा ठूलो प्रभाव छ र यसले कसरी ताराहरूको अध्ययनलाई सजिलो बनायो।
यो मोडेल एकल अक्षांशमा ताराहरूको विश्लेषण गर्न सक्षम हुनको लागि सिर्जना गरिएको हो। त्यो भन्नु पर्ने हो, निश्चित अक्षांशमा रहेका सबै ताराहरूलाई जान्नुहोस्। यसको प्रयोग गर्न, डेटा र उपकरणको विभिन्न विमानहरू ताराहरू फेला पार्न सक्षम हुन समायोजित गरियो। यदि तपाईं अर्को प्रकारको अवलोकन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले फेरि सबै डाटा समायोजन गर्नुपर्दछ र स्क्र्याचबाट सुरु गर्नुपर्‍यो।
यो प्रयोग गर्नको लागि सरल साधन थियो तर सबैभन्दा अधिक सीमितताको साथ एक, किनकि तपाईं केवल एक अक्षांशको ताराहरू मात्र जान्न सक्नुहुन्थ्यो। समय बित्दै जाँदा उनीहरूले अन्य परिष्कृत मोडेलहरू पनि जारी गरे जसले कामको सहजतामा सुधार ल्यायो।
यो मोडेल अघिल्लोको सम्बन्धमा विकसित भयो। यसले एकै समयमा सबै अक्षांशहरूको सबै जानकारीहरू पनि थाहा पायो। यसले अवलोकनको गुणवत्ता र यसमार्फत प्राप्त गरेको जानकारीको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्यायो। यो प्रयोग गर्न सबैभन्दा जटिल उपकरण हो र धेरै वैज्ञानिकहरूले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्नको लागि धेरै समय लिए। एक पटक यसको अपरेसन नियन्त्रण भए पछि यसले उत्तम जानकारी दिन सक्छ।
यो उपकरण केवल आकाशमा के थियो हेर्नका लागि मात्र प्रयोग गरिएको थिएन तर अग्लो समुद्रहरूमा ओरिएन्ट नाविकहरूलाई पनि। यो उपकरण देखेर समुद्रमा जहाजहरू मार्गनिर्देशन गर्ने ठूलो सम्भावना थियो, समुद्रमा अधिक अनुकूलित संस्करण विकसित भयो। यो स्थिति र अक्षांश जुन उनीहरूमा थिए भनेर जान्न धेरै उपयोगी थियो। यो मानौं कि यो नेभिगेसन प्रणाली हो तर धेरै आदिम।
केवल प्रस्तुत समस्या यो हो कि यो संभाल गर्न गाह्रो थियो र लामो शिक्षाको आवश्यक थियो।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले एस्ट्रोलाबको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » एस्ट्रोलाब